Warshadaha Shiinaha Gawaarida waaweyn iyo soosaarayaasha | ShiningPlast
TaringPlast Tank Tarp waxay muhiim utahay gawaarida qashin-qubka, trailer-ka, daboolida gogosha sariirta qolka jiifka, daboolka qalabka dhismaha, daboolida qalabka dhismaha, xamuulka, cagafyada, qalabka iyo daboolida qalabka. Muujinta waajibaadka culus ee labajibaaran dharka polyetylen-ka kaas oo leh awood jeexis badan, iyo sidoo kale laba jibaar dhinacyada iyo dhamaadka. Steel D-ring oo leh walxo cusbooneysiiye oo cusbooneysiiyey meelkasta oo dhowr dhudhun marka loo eego wareega.
Miisaan 200-300 gsm
Waxyaabaha HDPE + LDPE
Xirashada Biyaha loom iyo jiirka wareega
Midab Sida macaamiishiiba codsadaan
Cabbirka Sida macaamiishiiba codsadaan
Daabacaadda Ilaa 4 midab
Xirmooyinka Caadiga ah
Qayb kasta oo kuxiran boorsada 'poly poly' oo ay ku jirto sumad la galiyay.
2. Alaabooyin gaar ah oo ka kooban hal kartoon ama baaldi ku jira.
3. Soo bandhigid qaas ah oo loo qaabeeyey (US ama EN Standard Pallets) haddii loo baahdo.
Mid xoog leh oo waara
· Tearproof: Cabbir u adkaysashada xoog badan ee taranka ayaa yareynaysa kala goynta inta lagu jiro gaadiidka iyo keydinta.
· Biyo-diid: waxay ka hortagtaa wasakhowga ama waxyeelada roobka ama qoyaanka.
· Salka geeska ah: Saddex geesiyaal lagu xoojiyay afar geesiyaal.
· UV-Resistant: Waxaan u adeegsanay daaweynta ugu fiican UV iyo xasilinta si loo xaqiijiyo xasilinta inta lagu gudajiro mudada dheer ee UV.
Hore: Xarig Xarig
Xiga: Cover Cover